ထာဝရဘုရားသခင် အယူအဆ – ဣဿရ နိမ္မာန၀ါဒ (Concept of God) | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ထာဝရဘုရားသခင် အယူအဆ – ဣဿရ နိမ္မာန၀ါဒ (Concept of God)	Posted by mm thinker on July 6, 2008
Posted in: Philosophy, Religion.	Tagged: Philosophy, Religion.	Buddhism As A Religion (4)
ဤသည်ကား နောက်ဆုံးတွင် လူသား၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် လူသားဝါဒတို့၏ ပေါင်းစည်းမှုဖြင့် ဘာသာတရား ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ထွန်းလာပုံပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သော လူပုဂ္ဂိုလ်တို့က ဘာသာတရားကို ထာဝရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြုပြင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ရန် ခက်ခဲကြောင်း ပြောကြသည်။ လူသားသည် ဘာသာတရားကို ဦးစွာဖန်တီးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်အယူအဆကို ဘာသာတရားထဲသို့ သွတ်သွင်းခဲ့သည်ဟုသာ ပြောနိုင်ပေလိမ့်မည်။ အမေရိကန် ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သော ပါမောက္ခ ၀ှိုက်ဟက် (Prof. Whitehead) က “မူလအစတွင် လူသားက ဘုရားသခင်ကို ဖန်ဆင်းပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဘုရားသခင်က လူသားကို ဖန်ဆင်းတော့သည်”ဟု ဆိုဖူးသည်။ သူ့ဆိုလိုချက်အရ ထာဝရဘုရားသခင်ကို လူသားကပင် ပြုလုပ်ပုံဖော်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်မှ ဖန်ဆင်းရှင်နတ်ဘုရား အယူအဆသို့ ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင် အက်နတိုး ဖရန့်စ် (Anatole France) က “ထာဝရဘုရားသခင် အယူအဆသာမရှိခဲ့လျှင်လည်း လူသားသည် တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း တစ်ပါးပါး ဖန်ဆင်းခဲ့ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား ၄င်းသည် စိတ်ဝိညာဉ်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်၏”ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဇသဘာဝအရ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဘေးကြောက်မှုများ၊ သံသယတရားများ၊ စိုးရိမ်သောကများ၊ စိတ်ပျက်ညည်းငြူမှုများ၊ ပူဆွေးငိုကြွေးရမှုများနှင့် အလိုရမ္မက်ကြီးမှုများကို ပြေပျောက်စေရန် ဒေ၀တန်ခိုး စွမ်းအင်တစ်မျိုးကား အမှန်ပင်လိုအပ်လှပေသည်။ ပြဿနာ အကျပ်အတည်းများကို ရှောင်ရှားရန် ကျွန်ုတို့သည် ပြင်ပစွမ်းအင် တစ်မျိုးမျိုး၏ နှစ်သိမ့်ပေးမှုတို့အပေါ် မှီခိုအားထားလေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် အက်နတိုး ဖရန့်စ်က ဘုရားသခင်မရှိခဲ့လျှင်လည်း မဖြစ်မနေတစ်ပါးပါး ဖန်ဆင်းရလိမ့်မည်ဟု လူ့စိတ်သဘောသဘာဝကို နားလည်စွာပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
← အစ်မခင်မင်းဇော်ရဲ့ ကယန်းအကြောင်းဆောင်းပါး	ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ (The Buddha) →	0 comments on “ထာဝရဘုရားသခင် အယူအဆ – ဣဿရ နိမ္မာန၀ါဒ (Concept of God)”
အမည်မရှိ on July 6, 2008 at 4:58 pm said: